Gulhi, The Maldives tsy misy frills | Vaovao momba ny dia
Gulhi, ilay Maldives tsy misy fotony
Enric Gili | | General, Maldives, Tsangatsangana
Androany aho hiresaka aminao Gulhi, nosy any Maldives tsy misy rendrarendra.
Rehefa mieritreritra an'i L isikaamin'ny maha-Maldives antsika rehetra dia tonga ao an-tsaintsika fialan-tsasatra mahafinaritra, dobo tsy manam-petra, morontsiraka paradisa ary fialan-tsasatra tsy hay hadinoina. Saingy efa nieritreritra ny handeha any Maldives ve ianao nefa tsy mandeha amin'ny trano fandraisam-bahiny na hotely mihaja?
Nataoko izany, nandeha tany Maldives aho fa Nijanona tao amin'ny nosy iray misy ny zanatany aho tsy misy rendrarendra, lavitra ny fizahantany iraisampirenena mitady fialan-tsasatra ankafizin'ny rehetra any Maldives. Tsy taona vitsy lasa izay, ny governemanta nasionaly dia namoaka lalàna mamela ny nosy eo an-toerana hanokatra trano hipetrahana. Talohan'ity lalàna ity dia ny nosy tsy miankina sy ny resort ihany no afaka mampiantrano mpizahatany vahiny.
Gulhi dia nosy kely misy kilometatra vitsivitsy miala ny renivohitry ny firenena Malé sy ny faritra atsimon'ny Kaafu Atoll. Mponina latsaky ny 1000 no monina amin'ny sombin-tany iray ihany mirefy 200 metatra ny sakany, 500 ny halavany. Tsy misy trano fandraisam-bahiny 10 na hotely kely hipetrahana.
Na dia mety hahagaga aza Ny Silamo dia manjaka ao Gulhi ary koa ny sisa amin'ny firenena. Ny finoana silamo no fivavahana ofisialy sy manjakazaka, manaraka azy fatratra ny mponina ary tokony hampifanaraka azy koa ny mpizahatany. Misy ihany ny maningana any amin'ireo nosy na toeram-pialan-tsasatra tsy misy ny Silamo.
Ny iray amin'ireo zavatra tokony ho ao an-tsaina iray alohan'ny handehanana any amin'ny nosy eo an-toerana any Maldives dia izany ny vehivavy dia tsy afaka manao bikini afa-tsy amin'ny faritra tena voafaritra ao amin'ny nosy, izay antsoina matetika hoe "beach bikini". Tsy misy alikaola amin'ireo nosy ireo sy ny mponina, araka ny didin'ny Silamo, manao ny Ramadany ary mivavaka manandrana an'i Mekka imbetsaka isan'andro.
1 Ahoana no ahatongavana any Gulhi?
2 Inona no hatao any Gulhi?
Ahoana no ahatongavana any Gulhi?
Ho any Gulhi Manoro hevitra anao aho mba hiresaka amin'ny hotely na trano fandraisam-bahiny aloha hanaiky ny lalana hahatongavana any amin'ny nosy. Amin'io lafiny io dia misy fomba 3 matetika handehanana amin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny nosy rehetra.
avion: no fomba haingana sy lafo indrindra. Misy nosy izay mihoatra ny 100 km miala ny seranam-piara-manidina, mandritra ny halavirana lava dia atoroiko azy io, eny, ny vidiny dia manodidina ny $ 150 ka hatramin'ny $ 300 isan'olona.
Sambo sambo: Safidy tena mitombina io raha mandeha be isika ary / na ny fotoana ahatongavan'ny fiaramanidina dia tsy mifanaraka amin'ny an'ny làlan'ny besinimaro. Manodidina ny 100 $ ka hatramin'ny $ 200 isaky ny sambo ny vidiny.
Sambo fitateram-bahoaka: io no safidy mety indrindra mankany amin'ny nosy amin'ny atol mitovy amin'i Gulhi. Tena marina ny vidiny ($ 2 ka hatramin'ny $ 4 isan'olona) ary manana faharetana 1 na 2 isan'andro na dia tsy miala isan'andro aza izy ireo.
Amin'io lafiny io dia hanazava ny fomba hahatongavako any Gulhi amin'ny sambo fitateram-bahoaka aho.
Raha vantany vao tonga amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Malé isika dia mila mandeha sambo izay hitondra antsika any amin'ny nosy Malé. Ny fahita isan'andro dia avo dia avo tokoa hanaovana ity dia ity ary $ 1 ny vidiny.
Efa ao an-tanànan'ny Malé isika dia mila mandray ny sambo fitateram-bahoaka avy ao amin'ny tobin'ny sambo hitondra anay avy any Male mankany Gulhi. Amin'ny ankapobeny dia miala amin'ny mitataovovonana izy io (1 na 2 tolakandro). Tokony ho 2 ora ny dia. Raha te handehandeha any Maafushi (nosy iray hafa eo an-toerana) isika dia tokony handray sambo hafa na hamantatra raha ny sambo mankany Gulhi dia mankany Maafushi (avy hatrany).
Inona no hatao any Gulhi?
Gulhi dia nosy iray any Maldives ary araka izay azontsika atao mankafy ny morontsirak'ireo paradisa. Satria ny nosy rehetra dia an'ny atolan'ny ray aman-dreny miaro azy amin'ny onja, iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra azo atao ny snorkeling na antsitrika eo amoron'ny atoll. Any no ahitantsika ny karazana haran-dranomasina sy trondro rehetra, tena fampisehoana.
Miaraka amin'ny trondro isan-karazany, safidy hafa ny fanjonoana izay natolotr'i Gulhi ho an'ireo mpizahatany tonga tany amin'ny nosy.
Hetsika izay amporisihiko anao hataonao dia jereo ny fomba fiainan'ny mponina ao aminy, ny zavatra ataony, ny zavatra ataony ary andramany zatra amin'ny fomba fiainanyAza mandeha irery any Gulhi amin'ny maha-mpizahatany anao!
Nosy kely dia kely izy ireo eo ambanin'ny silamo henjana. Mahaliana (ary mampametra-panontaniana) ny mahita ny fomba nanaronan'ny tarehy ny fiainany manontolo amin'ny nosy kely feno hazo rofia sy morontsiraka fasika fotsy sy vatohara.
Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny na hotely kely dia manolotra fitsangantsanganana roa heveriko fa mahaliana:
Ankafizo ny nosy kely tsy miankina irery ho antsika. Mamindra anao any amin'ny nosy sandika eo afovoan'ny ranomasina izy ireo ary tsy misy olon-kafa. Afaka snorkel isika ary mankafy paradisa kely ho antsika!
Ankafizo andro iray amin'ny trano fialan-tsasatra mahafinaritra. Eny, miresaka momba ny fandehanana any Maldives aho fa any amin'ny nosy eo an-toerana ary izao dia manolo-kevitra ny handeha any amin'ny toeram-pialantsasatra… Na izany aza, soso-kevitra ny mandeha sy miverina amin'ny andro iray ihany any amin'ny toeram-pivarotana lafo vidy. Ny vidiny dia tsy dia mora loatra, fa azo ekena kokoa noho ny mijanona ao amin'ny iray amin'izy ireo. Any ianao dia manan-jo saika amin'ny zava-drehetra afa-tsy ny fidirana amin'ny villa rano na hetsika tsy tafiditra ao na dia ho an'ny mpanjifa hotely aza.
Tsy isalasalana fa ny Maldives dia toerana iray ahafahanao miala amin'ny fihenjanana isan'andro sy mankafy fialantsasatra mendrika. Araka ny efa nolazaiko anao, raha mikasa ny handeha any ianao dia manoro hevitra anao handeha any amin'ny nosy eo an-toerana ary indray mandeha any raha maniry ny handeha any amin'ny toeram-pivarotana lafo vidy ianao mandritra ny 1 andro. Ny nosy eo an-toerana dia tena kely dia kely, ny fijanonana 3 na 4 andro isaky ny iray dia ho ampy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Maldives » Gulhi, ilay Maldives tsy misy fotony
Ny morontsiraka lava indrindra any Eropa
Ankafizo ny Andron'ny mpifankatia amin'ny alàlan'ny fanidinana baolina any Madrid